NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery fampitana | Pejy 2461 amin'ny 39966 | 2021 NAB Show News: Live Streaming, Podcasting, Engineering Engineering, TV & Radio Technology ary Post Production News. Show NAB 2021.
Comments Off ao amin'ny mpampianatra Production Production
1. Ampianaro ny mpianatra ny fomba fampiasana Final Cut Pro sy ny Adobe Premiere ho fanitsiana fitantarana.2. Ampianaro ny mpianatra hampiasa ny After Effects sy Adobe CS5 ho fanitsiana loko sy fiantraikany fototra.3. Ampianaro ireo mpianatra ny fomba fampiasana DaVinci Resolve amin'ny fanitsiana loko.4. Ampidiro ny fotokevitra fototra momba ny fanitsiana loko, ary koa lesona amin'ny fikarohan-tanana, fikandrana herinaratra ary fampiasana scopes.5. Ampianaro ireo mpianatra ny fomba fampiasana RED CINE-X ho fanitsiana loko.6. Ampianaro ny mpianatra amin'ny fomba fanao tsara indrindra ho an'ny làlan-jotra ho an'ny tetikasa miainga amin'ny 16mm, 35mm, HDSLR, ary ny fakan-tsary RED.7. Azavao ny hevitra momba ny fampihetseham-peo sy endrika endrika.1. Fahalalàna matihanina momba ny loko ...
Post Production injeniera
Comments Off amin'ny Post Production Engineer
Ny orinasam-pampahalalam-baovao mitombo dia mitady injenieran'ny horonantsary efa za-draharaha mba hampiroborobo ireo fotodrafitrasa famokarana aorianay. Ity toerana ity dia mitaky fifandraisana amin'ny mpiasa mpamokatra lahatsoratra, famakafakana olana, famahana olana ary famahana olana momba ny horonan-tsary. Tokony hanana traikefa amin'ny tambajotram-pamokarana lahatsoratra sy fametrahana server. Tantano ny hetsiky ny famokarana post broadcast amin'ny famolavolana, fampandrosoana, fampiharana ny fizotran'ny asa sy ny fitaovana. Tazomy ny fahaizana manome antontan-taratasy, fanohanana ary fikojakojana ny serasera sy ny fotodrafitrasan'ny orinasa NLE. Ny mpirotsaka hofidina dia tokony hanana fahatakarana betsaka momba ny fizotran'ny Post Production. Tokony hanana traikefa teo aloha tao amin'ny fotodrafitrasa famoahana lahatsoratra, na efitrano fandraisam-peo .Fahalalala ny famakafakana famokarana post, ...
Comments Off amin'ny Coordinator Production Production
Ilaina ny mpandrindra ny Production Production amin'ny orinasa mpamokatra mitombo, miaraka amina tetikasa marobe miseho ankehitriny. Ny olona manana andraikitra amin'izany dia handrindra ny lisitry ny fanaterana be dia be, hanitsy ny fandaharam-potoana ary hanara-maso ireo mpitantana haino aman-jery sy PA. Mitady olona izay manana fiheverana tsara amin'ny antsipiriany, mazoto amin'ny tenany, dodona ny hianatra sy handray anjara amin'ny orinasa lehibe. Ny mpandrindra dia hiatrika tambajotra lehibe toa ny AMC, Vh1, Spike, HIST, Discovery, Bravo, A&E, ary koa ny fiaraha-miasa amin'ireo departemantan'ny Casting sy Development anatiny.
Mpanampy amin'ny famokarana - Fotoam-potoana
Comments Off amin'ny Production Assistant - Tapany
Ny anjara andraikitry ny talen'ny famokarana dia sehatra hentitra, izay mitaky fahaiza-mitarika sy fahaiza-mampiasa tambajotra. Ny APD dia miara-miasa amin'ny Talen'ny Fandaharan'asa ary manampy amin'ny fampielezana ny dokambarotra. Ity andraikitra ity dia mety mitaky fanoratana, fanompana, feo, famahanana dokam-barotra, ary fanambarana an-tserasera sy andraikitra amin'ny mpandraharaha. Job Description: Manampy amin'ny fitantanana ny mpiasa mpamokatra ara-barotra sy ny asa workWork amin'ny AEs sy ny mpanjifa mba hamolavolana spots manokana. Miantehitra amin'ny mpanjifa momba ny creativeWrite, mamokatra, ary ny filazam-barotraRead na ad-lib mba hamantarana ny fiantsonana, fampahafantarana ary famaranana akaiky, breaksWork closely akaiky ny fifamoivoizana sy ny tsy fitovian-kevitra mba hanome toky ny dokam-barotra rehetra manerana ny rivotra.
Sr Director, Famatsiam-bola famokarana
Comments Off amin'ny talen'ny Sr, Famatsiam-bola amin'ny famokarana
Ny talen'ny Sr, ny toeran'ny Production Finance dia handray ny andraikiny amin'ny famolavolana ny politikam-pamokarana sy ny fomba fiasa eo amin'ny sehatry ny famokarana amin'ny ankapobeny momba ny famokarana an-trano. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiharana sy fanaraha-maso ireo fomba fanao sy fomba fanaovan-draharaha tsy miova izay mifandraika amin'ny fizotran'ny fizotrany sy ny fanaraha-maso anatiny; Ny toerana dia ho tompon'andraikitra amin'ny famolavolana sy ny fikojakojana ny teti-bolan'ny modely amin'ny famokarana an-trano an-tsoratra mandritra ny adiny iray sy sasany. Ankoatr'izay, ity toerana ity dia hitantana ny asan'ny Production Finance isan'andro ho an'ny tbs sy ny TNT. Anisan'izany ny famokarana an-trano, fahazoan-dàlana nahazo alalana. Anisan'ny andraikitra lehibe indrindra ny fanomanana fampisehoana ...
Comments Off amin'ny Tale momba ny famokarana
Clear Channel Springfield MO dia mitady olo-mendrika tsy manam-paharoa mba hitarika ny departemanta famokarana ara-barotra ataontsika amin'ny maha-Production Production izay mamorona; teti-dratsy; ary manatanteraka famokarana ara-barotra an-trano, maka varotra manomboka amin'ny hevitra ka hatramin'ny vokatra farany. Manatanteraka ny famokarana ara-barotra an-trano ao anatin'izany ny fandraketana, ny fanamafisam-peo, ny fifangaroana, ny fanodinana ary ny fitahirizana ny varotra. Asio famokarana ara-barotra mba hamelomana ny mpiasa. Fanohanan'ny famoronana amin'ny departemantan'ny varotra momba ny famokarana ara-barotra anisan'izany ny fanoratana ny dika ara-barotra raha ilaina. Manaraka sy manitsy ny tatitra momba ny tsy fitovian'ny raharaham-barotra isanandro. Fandefasana fitaovana audio digital.Work akaiky amin'ny fifamoivoizana sy fitohizan-tena mba hiantohana ny rivotra ara-barotra rehetraAssist amin'ny fanamarinana ny tatitra tsy hita isak'alina ...
Music Diary Media Group, orinasam-pamokarana mahaleo tena, dia mitady hanakarama Production Designer ho an'ny tetikasa mahaleo tena ho avy, mitifitra ny 12 desambra ka hatramin'ny faha-16. Sarimihetsika fohy nofinofy / iainana (9 minitra). Hitifitra tanteraka amin'ny seho maitso / sehatra feo izahay. Ny olona idealy dia hanana traikefa amin'ny fitakiana noforonin'ny effets visuels ary miasa amin'ny Supervisor VFX. Izahay dia mitady fanahy mamorona manana traikefa / endrika fananganana napetraka. Raha niara-niasa tamin'ny miniature ianao - dia fanampiny izany.
Comments Off momba ny ARAHOLO FAMPIANARANA
-Manoratra soratra -Manao ho toy ny fifandraisana amin'ny mpanonta sy mpanoratra ary ny vondrona mpanamboatra-Fanondranana ny porofo elektronika-pejy fandaharana (anisan'izany ny tabilao / tabilao ary ny famoronana latabatra) -An-fanovana ny kopia-fanomanana nomerika amin'ny haino aman-jery sy ny famoahana nomerika-Fitantanana isan-karazany. Adidy mifandraika amin'ny fahazoan-dàlana sy ny zon'ny mpamorona-1-2 taona famokarana / traikefa an-tsary-Adobe CS6 miaraka amin'ny fanamafisana ny InDesign-Acrobat Pro-Microsoft Word-Mahay amin'ny fampiasana ny Mac-Exposure amin'ireo teknolojia nomerika toa ny XML a plus-QuarkXPress traikefa. mari-pahaizana fanampiny College
Page 2,461 ny 2,471«Voalohany...2,4302,4402,450«2,4592,4602,4612,4622,463»2,470...Last »